Knowledge Archives - Page 174 of 192 - Thutazone
ကမ္ဘာကျော် ဟွန်ဒါ ကုမ္ပဏီ အကြောင်း
အာရှတိုက်အကြောင်း နှင့် ထူးခြားအချက်အလက်တချို့
အာရှတိုက်သည် ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး လူနေမှုစံနစ်များ ယဉ်ကျေးမှုများ ထွန်းကားခဲ့သော အရပ်ဖြစ်သည်။ ဆူမာ၊ ဘေဘီလုံ၊ အက်စ်ဆီးရီးယား၊ မီဒီယာနှင့် ပါရှားတို့သည် အလွန်ရှေးကျသော လူနေမှုစံနစ်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ ထွန်းကားခဲ့ရာ အင်ပါယာများအဖြစ် ကျော်ကြားသည်။ အာရှဆိုသောအမည်သည် ရှေးဟောင်းဂရိဘာသာစကားမှတဆင့် လက်တင်ဘာသာသို့...
အောက်ချင်းငှက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲနေထိုင် လေ့ရှိသောငှက် ဖြစ်ပြီး ယင်းအား မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကွင်းပြင်နှင့်တောင်ခြေများတွင် အနှံ့အပြားတွေ့ရှိနိုင်လေသည်။ ချင်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အောက်ချင်းငှက်သည် ပရွက်ပျံများ ၊ လင်းနို့များ နှင့် မြွေသေများကို ဖမ်းယူ စားသောက်လေ့ရှိသည်။...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောက်မျက်ရတနာ အမျိုးပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် စိန်သည် အဖိုးထိုက်တန်ဆုံးသော ရတနာတစ်မျိုးဖြစ်၏။ စိန်သည် လူတို့၏ လက်ဝတ်ရတနာ တန်ဆာများအတွက်သာမက စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အရေးပါသည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မာခြင်းအဆင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အဆင့် ၁၀ ၌...
Written By Ko Kyaw Min Aung လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၅၀၀၀ကျော်လောက်က မိုဟန်ဂျိုဒရိုဆိုတဲ့မြို့ကြီးတမြို့ အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်း (ယနေ့ခေတ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း)အိန္ဒူမြစ်ဝှမ်းမှာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ အီဂျစ်၊မက်ဆိုပိုတေးမီးယားယဉ်ကျေးမူတွေနဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တယ်။ မိုဟန်ဂျိုဒရိုဆိုတဲ့နာမည်ကအခုခေတ်မှပေးထားတဲ့ နာမည်ဖြစ်ပြီး "မရဏဘုံသားတို့ရဲ့စံမြန်းရာ"လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီမြို့ကြီးရဲ့မူလနာမည်ရင်းကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြတော့ပါဘူး။ ဒီမြို့ကြီးမှာ ဘယ်လူမျိုးတွေနေသွားကြတယ်ဆိုတာလည်းအတိအကျမှန်းဆလို့မရကြဘူး။ နှစ်ပေါင်းလေးထောင်နီးပါးလောက်စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဒီမြို့ကြီးကို...
မာကျူရီခေါ် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဗီးနပ်စ် ၊ စေတန် ၊ ဂျူပီတာ ၊ မားစ် စတဲ့ဂြိုဟ်တွေအကြောင်းတော့ သုတဇုန်မှာတင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ နေနဲ့အနီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ မာကျူရီ (ခေါ်) ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်အကြောင်းကို သုတဇုန်မိတ်ဆွေများအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်၏...
Via : မိုရှေဒါယန်အစ္စရေးသူရဲကောင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးချိန်တွင် (Jews)ဂျူးလူမျိုးတို့၏ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ပို၍ ပြင်းထန်လာသည်။ မိုရှေဒါယန်သည် (Haganah)ဟာဂါးနားအဖွဲ့ကြီး၏ အလံတော်အောက်တွင် နိုင်ငံရေးစောက်ချ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ ဂျူးခေါင်းဆောင်ကြီး (David Ben-Gurion) ဒေးဗစ် ဘင်ဂူရီယန်...
Page 174 of 192 Prev 1 … 173 174 175 … 192 Next